Apple Watch inodaidza 911 uye inochengetedza muridzi wayo anga akarara asina chaanoziva | Ndinobva mac
Apple Watch inodaidza 911 uye inochengetedza muridzi wayo anga akarara asina chaanoziva
Zvinonyaradza kuziva kuti kuedza kwevanhu veCupertino kubatsira vashandisi ve Apple Watch tora mhedzisiro inogutsa. Kune atove akawanda anogona kuverenga kuti yedu Apple Watch yakachengetedza hupenyu hwedu panguva yakaoma nguva.
Kunyangwe iri pamwe nekudzora kweiyo kurova kwemoyo, iyo ECG inosanganisa kubva kune akateedzana 4 kana yekudonha detector, iri kubatsira vashoma uye vazhinji vashandisi. Kunyangwe isiri iro rakakura kwazvo boka remakesi, chokwadi ndechekuti kufarira kunoiswa nekambani mukugadzira kwayo zvishandiso zvinotibatsira kutichengeta.
Vhiki rapfuura, 911 emergency services mune imwe nzvimbo ye Phoenix Vakagamuchira runhare kubva kuzwi rakagadzirwa nekomputa richivaudza kuti mumwe munhu akadonha uye asiri kupindura kwaziso dzavo.
Iko kufona kwakauya kubva kuApple Watch iyo yakaona kuti muridzi wayo aive mudambudziko. Patrol yaive padhuze yakamhanyira kune location yakapihwa neiyo mudziyo ndokuwana murume asingazivi. Kuzivikanwa kwemunhu akakuvara hakuna kuziviswa.
Chokwadi ichi chakatsanangurwa kune webhusaiti yenhau KTAR maneja we Chandler Dhipatimendi reMapurisa, Adriana Cacciola. Inotaura zvirevo kuti "murume uyu angadai asina kukwanisa kutipa nzvimbo yake kana chero ruzivo nezve izvo zvaiitika." "Ini ndanga ndisingatozive kuti chero rubatsiro rwuri kuuya kusvika patrol yauya panzvimbo iyi." Anovimbisa kuti dai vakatora nguva yakareba kuti vasvike, murume uyu aigona kuve nemhedzisiro.
Kufona otomatiki kuti ubatsirwe mushure mekudonha chinhu cheazvino mamodeli eApple Watch. Asi vashandisi vanofanirwa kuve nechokwadi chekuti Apple Watch kudonhedza kuona kwashandurwa. Kana ikaona kuti munhu anga asingachinje kweinenge miniti, wachi ndichazongo daidza 911.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple Watch inodaidza 911 uye inochengetedza muridzi wayo anga akarara asina chaanoziva
Kupamba muzvitoro zveUS, kuvhura zvitoro kuSpain uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac